Joyina iqembu le-U LIVE Games. Qalisa ukusakaza.
Thumela izithombe namavidiyo. Thola ngokudala okuqukethwe kwegeyimu.
Imidlalo ye-L LIVE iyisiteji sokusakazwa mayelana nemidlalo nama-esports lapho abalobi besakaza bukhoma ngokusakazwa, okuthunyelwe kwesithombe nokuqukethwe kwevidiyo futhi baxoxe nezithameli.
Sifuna ababhali abanethalente abalungele ukudala okuqukethwe okuhlukile.
Nweba ababukeli bakho
Sisekela ukusakazwa okuningi. Usunaso isiteshi se-YouTube noma i-Twitch kepha ufuna ukubukwa okuningi? Vele ungeze Imidlalo ye-U LIVE kuzilungiselelo zakho.
Ipulatifomu yethu iyatholakala emazweni angama-250 futhi isekela izilimi eziyi-12. Noma yikuphi ukuxoxa noma okuqukethwe okubhaliwe kuhunyushwa ngokuzenzakalela ngakho-ke awudingi ukwazi ulimi lwezilaleli zakho.
Sebenzisa amandla eMidlalo ye-U LIVE ukuze uzuze ekusakazweni.
Sikhokha ngomzuzu (ngemifudlana) nokubukwa ngakunye (kokuthunyelwe). Uma unababukeli abaningi, sikukhokhela kakhulu. Abasebenzisi bakhokhela isithombe ngasinye noma ukubukwa kwevidiyo, Imidlalo ye-U LIVE ikhokha ekubukeni ngakunye okungu-50.
Thumela okuqukethwe okukhethekile okutholakalayo kwababhalisile kuphela bese usetha izindleko ozidingayo. Sithatha ukuheha ababukeli.
Sizokuphinda kabili noma yini oyitholile epulatifomu le-U LIVE Fit futhi sikunikeze ngokusekelwa konjiniyela, uma ngabe ungabhalisela abangaphezu kuka-5000. Mane uthumele isixhumanisi ekhasini lakho ne-ID yakho ku-imeyili ye-U LIVE Games: hello@ulive.games
Sivumela ukuthumela izixhumanisi ezinsizakalweni zeminikelo nakuma-e-wallets ukuze wamukele amabhonasi asuka kubasebenzisi.
Yiba nobuciko ekusebenzeni nezithameli: mema ababukeli abanentshisekelo kumidlalo. Ngenxa yohlelo oluhambisana nalo singathola isilinganiso esiphezulu ngokusebenzisana okunjalo.
Yabelana ngesixhumanisi sakho Emidlalweni ye-U LIVE ekuxhumaneni nomphakathi, uyithumele kuwebhusayithi yakho noma uyithumele kubangani bakho ngamunye - thola u-30% ekuthengeni kwalabo obameme.
Thola i-14% emalini etholwa abanye abasebenza ngokusakazwa. Kufanele babhalise kuphela ngesixhumanisi sakho.
Akunazindleko zokukhokhiswa - U LIVE Fit ithatha ubungozi bokubuyiselwa.